औषधिको पछाडि हुने गरेकाे रातो धर्काको अर्थ धेरैलाई थाहा नहुनसक्छ, थाहा नहुदाँ खतरनाक बन्नसक्छ ! – Sapana Sanjal
Sapana Sanjal : औषधिको पछाडि हुने गरेकाे रातो धर्काको अर्थ धेरैलाई थाहा नहुनसक्छ, थाहा नहुदाँ खतरनाक बन्नसक्छ ! । हामीलाई थाहा छ कि डाक्टरको सल्लाह बिना औषधि खानु हुँदैन तर सामान्यतय टाउको दुखेदेखि झाडावान्ता हुँदा भने कुन औषधि खाने भन्ने धेरैलाई ‘कन्ठ’ जस्तै भइसकेको हुन्छ ।
यस्तो भएमा हामी आँफै पनि औषधि खाने गरेका छौँ । यो कुरा पनि थाहा नहुनेहरूका लागि भने विज्ञ ‘मेडिकल सञ्चालक’ हुन् । हामीमध्ये कतिपयले याद गरेका हुँदैनौं कि कुनै औषधिमा विशेष संकेत पनि हुन्छ भनेर । तपाईंले एकप्रति ट्याब्लेट औषधिको पछाडि हेर्नुभयो भने अधिकांशमा रातो धर्का देख्न सक्नुहुन्छ, दुखाइ कम गर्ने क-डा औषधि र एन्टिबायोटिक्समा विशेषगरी यस्तो संकेत कोरिएको हुन्छ ।
Nextसाताकाे पहिलाे दिन आइतबार बढ्यो सुनकाे भाउ, यस्ताे छ आजकाे भाउ